अष्ट्रेलियाका नेपालीमा मानसिक रोगको समस्या बढ्दो |
10 January, 2018 | Kunjar Bhattarai | 5015 Views | comments
नारायण खड्का,अष्ट्रेलिया — एक सातामा दुईजना नेपालीद्धारा आत्महत्या गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै सोमबार एक नेपाली विद्यार्थीले आत्महत्याको धम्की दिदै नेपालका परिवारमा सन्देश पठाए । लगत्तै सिड्नी र मेलबर्नका नेपालीहरुले प्रहरी, एम्बुलेन्सलाई उद्दारका लागि खबर गर्नुपऱ्यो ।
अष्ट्रेलियामा उच्च शिक्षा र उज्जवल भविश्यको चाहना राखेर आएका नेपालीहरुले आत्महत्याको बाटो रोज्न थालेपछि यहाँका नेपाली समुदाय चिन्तित छन् ।
हालै घटेको घटनामा एक महिला पहिलेदेखि सिड्नीमा ब्यवस्थित रुपले बसोबास गरिरहेकी थिईन भने एक महिला ४ वर्षपहिले अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया आएकी थिइन् । एक महिला यहाँ उच्च शिक्षा अध्ययन सकेर नर्सको रुपमा कार्यरत थिइन् भने अर्की महिला स्थानीय कलेजमा अध्ययनरत थिइन् । आधिकारिक तथ्यांक नभएपनि अहिलेसम्म करिब १ दर्जन नेपालीहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताइएको छ ।
अष्ट्रेलियामा रहेर मानसिक रोग बिशेषज्ञका रुपमा काम गरिरहेकाहरुका अनुसार नेपालीहरुमा पछिल्लो समयमा मानसिक रोग बढ्दै गएको छ । अष्ट्रेलियाको राष्ट्रिय अनुपात जस्तै प्रत्येक ५ नेपालीमा एक ब्यक्तिमा कुनै न कुनै मानसिक समस्या रहेको उनीहरुको दाबी छ । बिशेष गरेर आफुमा समस्या भएपनि स्वीकार गरिनहाल्ने र उपलब्द्ध सेवाहरु समेत समयमै नलिने प्रवृतिका कारण नेपालीहरु मानसिक रोगको चपेटामा पर्दै गएका हुन् ।
मानसिक रोग बिशेषज्ञ तथा अष्ट्रेलिया सरकारको सिड्नीस्थित टेबलल्याण्डस मानसिक स्वास्थ्य सेवाको प्रमुखका रुपमा काम गरिरहेका डा. घनश्याम चापागाईं अहिले पनि आफुले दर्जनौ नेपालीहरुलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवा दिइरहेको सुनाउँछन् । उनका अनुसार उपचारका लागि आउने अधिकांश विरामीहरुले शुरुको समयमा भन्दापनि रोग बढिसकेपछि मात्र आउने गरेकाले समस्या थपिने गरेको छ । एकातिर मानसिक रोगको उपचारका लागि नेपाली बिशेषज्ञ भेट्न नचाहने प्रवृति र अर्कोतिर मानसिक रोग भएपनि यसलाई कमजोरीका रुपमा लिने र स्वीकार नगर्ने चलन नेपालीहरुमा भएको उनको अनुभव छ ।
अष्ट्रेलियाको सरकारको तथ्यांक अनुसार प्रत्येक बर्ष २ हजार ७ सय ९५ जनाले आत्महत्या गर्ने गर्दछन भने सन २०१६ मा यो संख्या २ हजार ८ सय ६६ थियो । मानसिक रोग यहाँ मृत्युको कारक रोगमध्ये १३ औं नम्बरमा आउने तथ्यांक उपलब्ध छ । यहाँको केन्द्र र राज्य सरकारले मानसिक रोग भएकाहरुलाई उपचारका लागि बिभिन्न गोप्य परामर्श, उपचारहरु समेत उपलब्द्ध गराउने गरेको छ । यद्यपी मानसिक रोग अपेक्षित रुपमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन् ।
लैङ्गिक र अन्तर्राष्ट्रिय विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेकी अञ्जना रेग्मी अष्ट्रेलियामा उमेर समुह अनुसार मानसिक समस्या देखिने गरेको बताउँछिन् । सबैभन्दा बढी युवाहरुमा यो समस्या गम्भिर रुपमा देखिएको उनको अनुभव छ । यहाँ रहेका नेपालीहरुमा आफ्ना समस्याहरु अरुलाई भन्ने वातावरण नभएकाले समेत समस्या थपिदै गएको उनको भनाई छ । एकातिर सामाजिक सहयोग र सहकार्य कम हुने र आफ्नो नजिकको परिवार पनि आफुसँग नहुने भएकाले मानसिक रोगले अझ समस्या सृजना गरेको हो ।
मेलबर्नमा मानसिक रोग बिशेषज्ञका रुपमा काम गरिरहेका डा. अनुपम पोखरेल नेपालीहरुमा मानसिक समस्या बढ्दै जानुमा अष्ट्रेलिया आउनुअघि जे सोचेर आएको हुन्छ त्यस्तो वास्तविकता नहुने र नेपालमा परिवारले आवश्यक्ताभन्दा धेरै अपेक्षा गर्नाले समस्या आउने गरेको हो । बिद्यार्थीहरु यहाँ आउनुअघि नै यहाँको वास्तविकता र यथार्थसँग परिचित भएर आएको खण्डमा केही हदसम्म उनीहरुलाई सहज हुने उनी सुनाउँछन् ।
पछिल्लो समयमा मानसिक लगायतका समस्या बढ्दै गएपछि एनआरएनले समेत सहयोग गर्ने उद्देश्यले हेल्प डेस्क सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । एनआरएन न्यु साउथ वेल्सका संयोजक तथा उपाध्यक्ष नन्द गुरुङले नेपाली समुदायलाई सहयोग गर्नका लागि आफुहरुले सामाजिक पहल सुरु गरेको जानकारी दिए ।
गोरखा समाज अष्ट्रेलियाको अध्यक्षमा त्रिलोचन पोखरेल
सिड्नीमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु
अष्ट्रेलियामा प्रर्दशन गर्नका लागि ३५ लाख रुपैँयामा बिक्रि भयो ‘जात्रै जात्रा’
अस्ट्रेलियाबाट आयो गायक बिष्णु हरि पौडेलको ”हुलाकी”(भिडियो सहित)
अस्ट्रेलियामा ‘नेपाल फेस्टिभल २०१८ सिड्नी’ हुँदै
अस्ट्रेलियामा विदेशीहरुले समेत दसैंं तिहार कार्यक्रममा देउसीभैलो खेले